မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ဆွေမျိုး ဆာမိနဲ့ အမီနာတို့ဆီမှာ
အိန္ဒိယမှာ နေသူတွေတောင် ရေးကြတာမတွေ့လို့ အတွေးပေါက်မိတာလေး ရှာရေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အတော်များများကလည်း ကုလားဆိုရင် “လား” တောင် သုံးလေ့သိပ်မရှိကြ
တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ခုမှပိုသိလာမိတာပါ။
လူဦးရေ ၁,၁၇၃,၁၀၈,၀၁၈ (July 2010 est.) ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံ
ဟာ လူဦးရေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်
နေရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ ကနေ့သူတို့မြေပုံရဲ့ အနောက်မြောက်ဖက်က Indus Valley (တောင်တန်း)
တဝိုက်မှာ ဘီစီ ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ကတည်းကစပြီး မြို့ပြလူနေမှုတွေ အစပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာသာရေးမှာတော့ ဂျိန်းဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်ဆလင်တို့ ထွန်းကားလာခဲ့ရာမှာ အဓိက
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့တွန်းအားကြောင့် ကျနော်တို့ “ဇာတ်” လို့ သိကြတဲ့ လူတန်းစား ခွဲခြားမှုစနစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်
လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၀-၁၁ ရာစုဝန်းကျင် မွတ်ဆလင်တွေ ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ မိန်းမတွေကို ခွဲခြား
ဆက်ဆံတဲ့ဖက်မှာ ဓလေ့တွေ ပိုပြီးဆပွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် အမြစ်တွယ်
ခဲ့တဲ့စနစ်ဟာ ဒီကနေ့အထိ (အထူးသဖြင့် နယ်တွေမှာ) အနည်းနဲ့အများ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေသေး
တာ တွေ့ရပါမယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ မိန်းမတွေကို ဖိနှိပ်တာ ရိုက်နှက်တာတွေ၊ ဇာတ်မတူရင် ပေါင်းဖက်
လက်ဆက်ဖို့နေနေသာသာ ကူးလူးဆက်ဆံဖို့တောင် မလွယ်တာတွေကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ
အစိုးရအနေနဲ့ ဇာတ်နိမ့်သူတွေအတွက် ကျောင်းနဲ့ အစိုးရဋ္ဌာနတွေမှာ နေရာသတ်မှတ် ဖယ်ထားပေး
တာမျိုး၊ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဥပဒေတွေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲ ညီမျှလာစေ
ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် ကွာဟချက်တွေကတော့ ရှိနေတုန်းပါ။
တကယ်တန်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၇ မှာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၄၉ မှာ အတော်ကျယ်
ပြန့်ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ချမှတ်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီး နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ
ကို ညီမျှစေဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီကနေ့အထိ လူတန်းစားခွဲခြားကွဲပြားမှုတွေကတော့ ဆက်ပြီး
ဒီစာမှာ အထူးပြုချင်တဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ဇာတ်ခွဲခြားမှုကို အကြမ်းဖျင်းကြည့်ရအောင်။
အခြေခံအကျဆုံး ခွဲခြားထားတဲ့ လူတန်းစား ၄ ခု ရှိပါတယ်။
(၁) ပထမ အမြင့်ဆုံး လူတန်းစားကတော့ Brahmins တွေပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဗြဟ္မာ တွေလို့
သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားကျောင်းကန် ဝေယျာဝစ္စ တာဝန်ယူထားသူတွေ၊ ပညာရှင်ပုဏ္ဏားနဲ့ အခြား
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
(၂) ခတ္တိယ လို့သိကြမယ့် Kshatriyas တွေကတော့ စစ်သည်နဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေ ဖြစ်ပါ
တယ်။ မြေပိုင်ရှင်လို အထက်တန်းလွှာတွေလည်း ပါဝင်ပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ကြွယ်ဝမှုနဲ့
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သူ လူတန်းစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Vaisyas တွေကတော့ အရောင်းအဝယ်သမား၊ ကုန်သည်နဲ့ အရာရှိအရာခံငယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကုန်ထုတ်သူတွေမဟုတ်ပဲ ကုန်ချောရောင်းဝယ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ သစ်သီးရောင်းတာ သူတို့
အလုပ်ဖြစ်သလို ဒန်အိုးဒန်ခွက်ရောင်းတာလည်း သူတို့အလုပ်ပါပဲ)။
(၄) Sudras တွေမှာတော့ ကာယလုပ်သားတွေ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ အတန်းစား
တွေ ပါဝင်ပြီး လက်မှုပညာသည်တွေ၊ ဆံပင်ညှပ်သမားနဲ့ ဥယျာဉ်မှူးတို့လိုတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
- နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ လူတန်းစား စာရင်းမဝင်တဲ့ အပယ်ခံ Pariah ‘Harijans’ or Dalit or
Outcastes or ‘Untouchables’ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတဲ့ အောက်ဆုံးက လူတွေပါ။ မြန်မာပြည်မှာ
ဘုရားကျွန်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ မြေပြင် (နင်းပြား)၊ အဖိနှိပ်ခံ၊ အခြေမွခံ၊
ဘုရားသားသမီး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတဲ့ ဒီလူတွေဟာ အပေါ်ကလူတန်းစားတွေရဲ့ ဖယ်ကျဉ်တာ
ကို ခံရတဲ့အပြင် သူတို့ထဲမှာတောင် အောက်တကာ့အောက်ဆုံး အမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါသေးသတဲ့။
ဇာတ်မြင့်သူတွေနေတဲ့ မြို့ရွာထဲ နေခွင့်မရသလို ဘုရားအတူရှိခိုးခွင့်လည်းမရှိပဲ ဇာတ်မြင့်သူတွေကနေ
ရေတိုက်တာတောင် ခွက်နဲ့နှုတ်ခမ်းထိပြီး သောက်ခွင့်မရှိကြပါ။ သူတို့အထဲမှာ ဂီတသမားတွေလည်း
ပါဝင်ကြပြီး သူတို့ဖျော်ဖြေတာ နားထောင်ကြပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တူရိယာပစ္စည်းတွေကိုတော့ မထိမကိုင်
ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လုပ်အားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ ဇာတ်မြင့်တွေက
ရယူခံစားကြပါတယ်။ (ဥပမာ အစားအစာချက်ပြုတ်ရာမှာသုံးတဲ့ နွားချေးခြောက်တွေကို ဇာတ်မြင့်တွေ
က သုံးကြပေမယ့် နွားချေးခြောက်ကို အတုံးအခဲဖြစ်အောင် လုပ်သူတွေက Dalit တွေပါ)။
လူတန်းစားတွေမှာ အသေးစိတ်ပြန်ခွဲလိုက်ရင် jati လို့ခေါ်တဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဇာတ်အမျိုးအစားကွဲပေါင်း
၃,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး gotras လို့ခေါ်တဲ့ ထပ်ဆင့်ဇာတ်မျိုးကွဲပေါင်း ၂၅,၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မှတ်တမ်းတွေအရ အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်မှာ ဒါးပြမျိုးနွယ် (အတန်းအစား) ဆိုပြီးတောင် သတ်မှတ်ပေး
ခဲ့ရတာမျိုး ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဇာတ်တွေဟာ အတည်လားဆိုတော့ ရာနှုန်းပြည့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သမိုင်းထဲမှာ ဇာတ်နိမ့်
အတန်းအစားက ဘုရင် ဘုရင်မတွေဖြစ်လာလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဇာတ်မြှင့်လိုက်တဲ့ သာဓကတွေလည်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်ကြရာမှာလည်း အချို့အလုပ်တွေဟာ ဇာတ်(မျိုးစိတ်) တစ်ခုကနေ
သားစဉ်မြေးဆက် သီးသန့်ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြသလို ဓလေ့မျိုးတွေကြောင့် ကနေ့ခေတ် အလုပ်သမား
သမဂ္ဂပုံစံမျိုးတွေ ပေါက်နေတယ်လို့လည်း နှိုင်းယှဉ်ပြဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဈေးရောင်းတဲ့
Shudara အနွယ်ဝင်တစ်ယောက်ဟာ ဒန်သတ္တုအိုးခွက်တွေ ရောင်းနေပေမယ့် အလူမီနီယံ အသုံး
အဆောင်တွေကို ဝယ်လိုသူရှိရင်တော့ နောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သွားရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါ
မတူတဲ့ အနွယ်ဝင် (လူတန်းစား) တစ်ခုကလူဟာ မျိုးရိုးမရှိပဲ အလုပ်တစ်ခုကို ကြိုက်သလိုဝင်လုပ်လို့
မလွယ် (သို့မဟုတ်) မရနိုင်ပါဘူး။
၂၀၀၅ ခုနှစ် စာရင်းဇယားတွေအရ အနိမ့်ဆုံးအနွယ်ဝင် (Dalit) လူဦးရေပေါင်း အိန္ဒိယမှာ သန်း ၁၇၀၊
နီပေါမှာ ၄.၅ သန်း၊ ပါကစ္စတန်မှာ ၂ သန်း အပြင် သီရီလင်္ကာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေမှာလည်း အတိအကျ
မသိရတဲ့အရေအတွက်တွေနဲ့ ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကနေ့အချိန်မှာ သူတို့ကို Scheduled castes
(SC) လို့ တရားဝင် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Scheduled tribes (ST) လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မျိုး
နွယ်စုတွေကလည်း သက်သက်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ဦးရေက အိန္ဒိယနိုင်ငံ လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ ၇% လောက်
ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါ ကောက်ခံထားတဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ ခေတ်နောက်ကျတဲ့ လူတန်းစား
(Other Backward Classes - OBC) အားလုံးပေါင်းကလည်း အိန္ဒိယရဲ့ စုစုပေါင်း လူဦးရေနဲ့စာရင် ၃၂
ကနေ ၅၂% ကြား ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ခေတ်နဲ့အညီ အမြင်အတွေးနဲ့ သဘောထားတိုးတက်မှုတွေကို
အထင်အရှား တွေ့လာရတာတွေကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း အကောင်းဖက်ကို ပိုဦးတည်လာဖို့ပဲ
ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့သူတွေထဲမှာကြည့်ရင် မဟတ္တမဂန္ဒီဟာ Vaisyas မျိုးနွယ်
ကပါ၊ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူ နေရူးဟာ ဗြဟ္မာ မျိုးနွယ်ထဲကပါ။ Rajasthan ပြည်နယ် အုပ်
ချုပ်ရေးမှူး Vasundhara Raje Scindia ကတော့ ခတ္တိယ ထဲကပါ။ အခုတက်နေတဲ့ သမ္မတရှေ့က
သမ္မတဟောင်း KR Narayanan (၁၉၉၇) ဟာ အနိမ့်ဆုံးဇာတ်ဖြစ်တဲ့ Dalit ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ
နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရာမှာ အဓိကကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့တဲ့ BR Ambedkar ဟာလည်း
Dalit အနွယ်ထဲကပဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနုဿဗေဒဖက်ကတော့ အိန္ဒိယမှာ ၇၂% ဟာ (ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ် ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်မှာ
အနောက်မြောက်ဖက်ပိုင်းက စိမ့်ဝင်လာတဲ့) အာရိယန် (Aryan) အနွယ်ဝင်၊၂၅% ကတော့ (ဋ္ဌာနေ)
ဒြာဝီဒီယန် (Dravidian) အနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ပြီး ၃% ကတော့ မွန်ဂိုလွိုက်အနွယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(ချစ်ဦးညိုရဲ့ အလင်္ကာဒီပချစ်သူ စာအုပ်ဖတ်ဖူးသူများ ကတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ)။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံ
ပညာရှင်တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကနေ့အချိန်မှာ အားလုံး သွေးနှောနေကြပြီး မျိုးစစ်စစ်
လို့ လက်ညှိုးထိုးပြစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
အခိုင်အမာ သက်သေပြချက်တွေ မရှိသေးပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ မင်းမျိုးမင်းနွယ် “သာကီ”
ဝင်တွေဆိုပြီး အမျိုးတော်လိုသူတွေ ရှိသင့်သလောက် ရှိကြတာမို့ ဇာတ်အမြင့်ဆုံးတွေထဲက ခတ္တိယ
(Kshatriyas) လူတန်းစားဝင် ဘုရင်၊ စစ်သား၊ မြေရှင် စတဲ့ အမျိုးမျိုးရှိတာတွေထဲက ရော်ရမ်းပြီး စပ်
ဟပ် စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဘုရင့်အနွယ်မှ ဘုရင့်အနွယ်တွေပါဆိုရင်လည်း စိတ်ချမ်းသာကြစေဖို့
ဘာမှတော့ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်နဲ့စာရင် သမိုင်းနောက်ကြောင်း
ပိုပြီးအတိအကျ ရှာဖွေလေ့လာထားတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ အနေအထားနဲ့ယှဉ်ပြီး တွဲစပ်တွေးတောစရာလေးတွေ
အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် ရလာနိုင်ကြရင်တော့လည်း ကနေ့လို အသိပညာ အတတ်ပညာအရေးကြီးတဲ့
ခေတ်ကြီးမှာ အကျိုးအမြတ်ရှိမယ့် အလားအလာကောင်းတစ်ခုဆီ ဦးတည်သွားနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်
၀၂၊ ၀၂၊ ၂၀၁၁
* အောက်မှာက ရည်ညွှန်းထားတဲ့ စာအုပ်နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အချို့ပါ။ (မှတ်ချက် - အပြည့်စုံ မဟုတ်ပါ)။
1. Bhalla 2007, FEATURE-Women struggle to find place in modern India, viewed 11/06/2010, .
2. Bharati 2005, Women of India: Colonial and Post-Colonial Periods, SAGE India, New Delhi.
3. Bhargava et al 2005, Civil Society, Public Sphere and Citizenship: Dialogues and Perception, SAGE India, New Delhi.
4. Central Intelligence Agency 2010, The World Fact Book: India, viewed 22/06/2010, .
6. Government: National Portal of India 2010, Parliament, viewed 11/06/2010, .
7. Mandakranta 2000, Faces of the Feminine in Ancient, Medieval, and Modern India, Oxford University Press(US), New York.
8. Richard 2008, Citizenship: A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc., Oxford.
9. Singh S. 2010, Indie’s upper house passes pro-women bill, CNN, America, .
10. Sumi 2007, Women’s Livelihood Rights: Recasting Citizenship for Development, SAGE India, New Delhi.
Posted by မန်းကိုကို at 2/02/2011
အင်္ဂါဟူး February 2, 2011 at 2:06 AM
ကျေးဇူးပါ ဦးလေးရေ... မသိတာလေးတွေ သိခွင့်ရလိုက်တယ်လေ။
JUSTICE999BURMA February 2, 2011 at 4:22 AM
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီလိုခွဲခြားမှုတွေကုန်ခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်... လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဘာညာကွိကွ အမျိုးအနွယ်တွေ ကိစ္စကလွဲပေါ့...
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်တုန်းကတော့ ဘယ်အမျိုးနဲ့ ယူလို့အမွေကို ဘယ်သူမရတာ... ဖခင်အရင်သေဆုံးလို့သမီးက အမွေမရတာ၊ မိခင် အရင်သေဆုံးလို့သားတွေက အမွေမရတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်...
ခုခေတ်ကာလမှာတော့ အတော်လေးကို ကင်းရှင်းခဲ့ပါပြီ... ဒါပေမယ့် ခွဲခြားချင်စိတ်လေးတွေတော့ မည်သူမဆို ရှိနေတုန်းပါပဲ.. ဦးကျော်သူကိစ္စကို သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အနုပညာသည် တစ်ယောက် အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံစားပြီး တွေးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို တောင် သဘောထားမကြီးနိုင်တဲ့သူလို့ ရွံရှာမိတာအမှန်ပါ.. အရိုးစွဲမှုအချို့ ကျနော်တို့တိုက်ဖျက်ဖို့ လိုပါသေးတယ်....
ကိုဇော် February 2, 2011 at 5:11 AM
An Asian Tour Operator February 2, 2011 at 2:12 PM
"နာလာ့ရယ်ဂင်းဂလား" (how are you in Tamil)
ဇာတ်မြင့်တော့ ရှေ့ဆုံးမှာ ထိုင်တဲ့သူတွေ ဇက်ညောင်း အောင်မော့ကြည့်ရ မှာပေါ့။ ဇာတ်နိမ့်ပြန်တော့ လဲ နောက်က သူတွေက မမြင်ရဘူးးးတဲ့။ :P
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက လူထုဦးလှ တို့ ပါရဂူတို့ ရဲ့ ဟိန္ဒူ ပုံပြင် ဇာတ်လမ်း တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာ တော့ သူတို့ အယူသည်း လို့ ဖြစ်ရတဲ့ ကျေကွဲ ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်း တွေ နဲ့ယဉ်ပါးနေ သလိုပါပဲ :(
မန်းကိုကို February 2, 2011 at 3:09 PM
@ အင်္ဂါဟူး - မသိသေးတာ လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်မိတာ ဝမ်းသာရမှာပေါ့ကွာ၊ ဒီထက်ပိုသိချင်ရင်လဲ ကွာလာလန်ပူနားက Klang ဖက်မှာ သွားမေးကြည့်လို့ ရတယ်ကွ။ :-D
@ ရဲထွန်းဇော် - လာဖတ်တာကို ကျေးဇူးပါ။
@ JUSTICE999BURMA - “ခွဲခြားချင်စိတ်လေးတွေတော့ မည်သူမဆို ရှိနေတုန်းပါပဲ” ဆိုတာနဲ့ အရိုးစွဲနေတာတွေ ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။
ကိစ္စများမြှောင် လူတို့ဘောင်မှာ နေနေရတော့လည်း ဒါတွေက ရှောင်လွဲလို့လည်း ရကောင်းတဲ့အရာတွေ မဟုတ်သလို လူသားတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝမို့လို့ နည်းလာအောင် လုပ်လို့ရပေမယ့် ပျောက်ပျက်သွားအောင်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်သေးပါဘူး။
ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှောက်လိုက်၊ အခုတော့ ရွံရှာလိုက်ဖြစ်နေတော့ သတိတော့ထားပေးနော၊ စိတ်ခိုင်တဲ့လူတွေက လောကမှာ အနည်းသားကလား။ တော်ကြာ စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် ကျွန်ုပ်လည်း နည်းလမ်း မပေးတတ်ဖူး။ :-D
@ ကိုဇော် - လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
@ Datuk An Asian Tour Operator - ကြည့်ရတာ Dravidian အနွယ် စပ်ပုံရတယ်။ :-D
ပုံပြင် ဇာတ်လမ်း တွေထက် တကယ့်အဖြစ်တွေက ပိုပြီး အံသြကြေကွဲစရာတွေ အများကြီးပါ Datuk ရယ်။ မိန်းမတွေရယ်၊ ဇာတ်နိမ့်သူတွေရယ်ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ပုံတွေလည်း ဂူဂယ်မှာတင် အများကြီးပါ။ photo essay ဖြစ်သွားပြီး စာလည်း အင်မတန်ရှည်လျားမှာစိုးလို့ ဒီပို့စ်ကို အတော်အသင့် ချုံ့ထားတာပါ။ Pandita Ramabai ဆိုတဲ့ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းလောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဘဝနဲ့တင် အတော်အသင့် ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဗြဟ္မာမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့သူဟာ အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွေ၊ (စိတ်ထားကောင်းလွန်းပြီး အမျိုးသမီး စာတတ်ရေးကို အားပေးခဲ့တဲ့) မိဘတွေ မဲ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝ၊ (မောင်ဖြစ်သူ သေဆုံးပြီးနောက်) အိန္ဒိယမိန်းမသားတွေရဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ဘဝ၊ ဇာတ်မတူသူနဲ့လက်ထပ်လို့ အကြဉ်ခံရတဲ့ဘဝ၊ ခင်ပွန်းသည်သေလို့ အိန္ဒိယမိန်းမသားတွေရဲ့ အင်မတန်နိမ့်ကျ နှိမ့်ချခံရတဲ့ မုဆိုးမဘဝတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရာက (ခရစ်ယာန် သာသနာပြု အချို့နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာသူ အင်္ဂလိပ် အမေရိကန် အချို့တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့) မိန်းမသားတွေရဲ့ဘဝကို မြှင့်တင်ဖို့ တနိုင်တပိုင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး လူသိများတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုပါ။
naylinnhtun February 2, 2011 at 9:27 PM
နှပ်စပ်ပါပေတယ် ကိုကိုမန်းရေ အခုလိုဖတ်မိတော့မှ သိခွင့်ရတဲ့ အရာတွေရှိလာလို့မျှဝေရေးသားပေးတဲ့ အစ်ကိုမန်းကိုကျေးဇူးပါ ....
ှဆ၇ာမန်းကိုကိုသို့ : ကျနော်တို့အင်တာနက်က ကျော်ခွမှတွေ့ရတဲ့ဘဝ ဆွေမျိုးအမီနာနဲ့ဆာမိတို့ အကြောင်းဖတ်ရတော့ ကွန်မန့်မှာေ၇းချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဇတ်ကနိမ့်နေလေတော့ေ၇းခွင့်မရဘူး။ ဒီစီဘောက် .. မေးခွင့်တောင်းဆိုခွင့်များရှိမယ်ဆိုရင် သိချင်တာလေးမေးလို့ ရပါသလား။ ရိုသေစွာဖြင့် - ကာနီစန်
( c-box က တင်ထားတာပါ။)
မန်းကိုကို February 3, 2011 at 12:05 AM
မန်းကိုကို >> ကာနီစန်
ဘယ်သူမှ မထိခိုက် အကျိုးမယုတ်ရင်၊ ပြီးတော့ သိထားတာဆိုရင်တော့ အပန်းမကြီးပါဘူး၊ ဖြေပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိထားတာတွေက အကန့်အသတ်ရှိတာမို့ စိတ်ကြေနပ်အောင် ဖြေနိုင် မနိုင်တော့ အာမ မခံရဲပါဘူး။
(နာမည်က ကာနီစန် ဆိုလို့ မလေးရှားက Tamil လူမျိုးတွေမှာ Genesen ဆိုတဲ့ ဆင်တူနာမည်တော့ တွေ့ဖူးတယ်။ Tamil တွေက အသားပိုမှောင်တာကြောင့် Dravidian အနွယ်တွေလို့ ဆိုရမှာပေါ့)။
@ လှိုင်ဘွား - မလေးရှားထွက်ဆိုတော့ ကုလားတွေကို အနည်းနဲ့အများ သံယောဇဉ်တော့ ရှိမှာပေါ့နော :-)
(ကုလားလို့ သုံးထားတာ အချို့အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရင် ဆောရီးပါ။ မြန်မာပြည် အများသုံးအနေနဲ့ သုံးထားတာပါ။ လူမျိုးတွေ အတိအကျ ရှိတာကို နားလည်လက်ခံပါတယ်)။
Querciabella - Fine Tuning Biodynamics in Chianti Classico
Cats Movie: First look reveals giant world, cool fur tech and Taylor Swift in her element - CNET